ဟားမီးဇ် - ဝီကီပီးဒီးယား
နယ်စပ်၊ လမ်း၊ ခရီးသည်၊ ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သူခိုး၊ အားကစားသမား၊ သိုးကျောင်းသား၊ ဝိဉာဉ်လမ်းပြ၊ စွမ်းအားရှိ တမန်တော်
Hermes Ingenui (ဗာတီကန် ပြတိုက်)၊ ဘီစီ ၅ ရာစု မူရင်းဂရိလက်ရာကို ပွားထားသော ဘီစီ ၂ ရာစု က ရောမလက်ရာ၊ ဟားမီးဇ်သည် မြွေနှစ်ကောင်ရစ်ခွေ တောင်ဝှေး၊ ကစ်သရာ (စစ်သရာ) တူရိယာ၊ ဦးထုပ်အဝိုင်းများဖြင့် ဆင်မြန်းထားသည်။
အတောင်ပါဖိနပ်၊ မြွေနှစ်ကောင်ရစ်ခွေ တောင်ဝှေး၊ လိပ်၊ လိုင်ယာစောင်းတူရိယာ၊ ကြက်ဖ၊ ဦးထုပ်အဝိုင်း (အတောင်ပါ ဦးထုပ်တစ်မျိုး)
ဇုစ် နှင့် မိုင်းယာ
အီးယကပ်စ်၊ အန်းဂဲလော့စ်၊ အဲဖရာဒိုက်တီ၊ အပေါလို၊ အဲရီးဇ်၊ အားတစ်မစ်၊ ဒိုင်ယာနိုက်ဆပ်စ်၊ အင်နိုင်းယို၊ အဲရစ်၊ အားဆာ၊ အသီးနာ၊ အစ်လစ်သိုင်းယာ၊ ဟီးဘီး၊ ထရွိုင်မှ ဟဲလင်၊ ဟစ်ဖီးစတပ်စ်၊ ဟဲရာကလီးဇ်၊ ဟားမီးဇ်၊ မိုင်းနော့စ်၊ ပန်ဒိုင်းယာ၊ ပါဆက်ဖန်နီ၊ ပါးဆီးယပ်စ်၊ ရာဒါမန်သပ်စ်၊ ဂရေးဆစ်၊ ဟောရီး၊ လိုက်တီး၊ မြူးဇစ်၊ မွိုင်ရီး
Merope၊ အဲဖရာဒိုက်တီ, Dryope၊ Peitho၊
အဗန်းဒါ၊ ပန်၊ ဟာမဲဖရာဒိုက်တပ်စ်၊ အက်ဘ်ဒီးရော့စ်၊ အော်တောလစ်ကပ်စ်၊ အယ်ဒေါရော့စ်၊ အန်ဂဲလိယာ၊ မီတိလပ်စ
ဟားမီးဇ် (ဂရိ: Ἑρμῆς; အင်္ဂလိပ်: Hermes) သည် ဂရိဒဏ္ဍာရီ နှင့် ရှေးခေတ်ဂရိဘာသာမှ အိုလံပတ်တောင် နတ်ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်သည်။ နတ်ဘုရားတို့၏ ရှေ့တော်ပြေး တမန်တစ်ပါးဖြစ်ကာ လူသားတမန်တော်များ၊ ခရီးသည်များ၊ သူခိုးများ၊ ကုန်သည်များ၊ ဇာတ်ထုပ်ဟောဆရာများ ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ လူသားကမ္ဘာနှင့် နတ်ဘုရားကမ္ဘာတို့ကြား လျှင်လျင်မြန်မြန် လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာနိုင်သူဖြစ်၍ ၎င်းဝတ်ဆင်ထားသော အတောင်ပံပါသည့် ဖိနပ်များအကူအညီဖြင့် ထိုသို့သွားလာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝိဉာဉ်များကို မြေအောက် ကမ္ဘာသို့ လမ်းပြခေါ်ဆောင်သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
ဒဏ္ဍာရီတွင် ဟားမီးဇ်သည် နတ်ဘုရားတို့၏ တမန် ကိုယ်စားလှယ်တော်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ဇုစ် နှင့် မိုင်းယာတို့၏ သားတော်အဖြစ် ဖော်ပြကြသည်။ ကျီစယ်စနောက်သောနတ်တစ်ပါးအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ရာ 'ဟားမီးဇ်ကို ပူဇော်သော ဟိုးမားဓမ္မတေး'တွင် လူကြိုက်အများဆုံး အကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
၎င်း၏ စွမ်းရည်များနှင့် ပြယုတ်များတွင် ၎င်းဦးခေါင်းပုံထုထားသော လေးထောင့်ကျောက်တိုင် (herma)၊ ကြက်ဖ၊ လိပ်၊ လွယ်အိတ် (satchel) ၊ အတောင်ပံပါသော ဖိနပ် (talaria) ၊ အတောင်ပံပါသော ဦးထုပ် (သို့) ဦးထုပ်အဝိုင်း၊ ထန်းပင်၊ ဆိတ်၊ နံပါတ် (၄) ၊ ငါးအမျိုးအစားအချို့၊ အမွှေးနံ့သာတို့ ပါဝင်ကြသည်။ သို့သော်လည်းပဲ အဓိက အမှတ်သညာမှာ မြွေနှစ်ကောင်ရစ်ခွေနေ၍ အတောင်ပံပုံပါရှိသော တောင်ဝှေး (caduceus) ဖြစ်သည်။ ဟားမီးဇ်၏ စွမ်းရည်များသည် ၎င်းထက် ပို၍စောသော အစ်ထရူးရီးယာဒေသမှ နတ်ဘုရား တားမ်စ် (Turms) ကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပြီး တားမ်စ်အမည်သည် ဂရိစကားလုံး herma မှ ချေးယူထားသော အမည်ဖြစ်လေသည်။ (လွှမ်းမိုးသည်​ဆိုရာတွင် ဟားမီးဇ်၏ အရည်အချင်းများသည် နောင်တွင် တားမ်စ် နတ်ဘုရား၏ အရည်အချင်းများ ဖြစ်သွားခြင်းကို ဆိုလိုဟန်တူသည်။)
ရောမဒဏ္ဍာရီ၌ ဟားမီးဇ်ကို မာကျူရီနတ်ဘုရားအဖြစ် သိရှိ ခေါ်တွင်ကြပြီး မာကျူရီ (Mercury) သည် လက်တင်စာလုံး 'merx' မှ ဆင်းသက်လာခဲ့၍ အနက်မှာ ကုန်ကူးခြင်း (merchandise) ဖြစ်၍ ယင်းစာလုံးများ၏ ဇစ်မြစ်မှာ "merchant" and "commerce" ဤသို့ဖြစ်၏ ။
↑ Powell၊ Barry B. (2015)။ Classical Myth (8th ed.)။ Boston: Pearson။ pp. 177–190။ ISBN 978-0-321-96704-6။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named austin
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟားမီးဇ်&oldid=698514" မှ ရယူရန်